Faah faahin:- Kullan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo safiirka Imaaraadka Carabta – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Kullan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo safiirka Imaaraadka Carabta
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kulan gaar ah oo maalintii shalay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ku dhexmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo iyo safiirka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Maxamed Axmed Alcusaam.
Kulankaasi oo la sheegayo inuu ahaa mid albaabada u xiran ayaa hadane warar ay si hoose u heshay warbaahinta Bulshoweyn waxay sheegayaan in labada dhinac ay uga wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii dowladda Imaaraadku kaallinteeda uga qaadan laheyd gurmadka dadka abaaruhu ku saameeyeen gobolada dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa la sheegayaa inuu dowladda Imaaraadka Carabka ku ammaanay taageeradda buuxda oo ay xilli kasto la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Safiirka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Maxamed Axmed Alcusaam ayaa isna sheegay in dowladiisa ay taageero deg-deg ah siin doonto dalka Soomaaliya, si ay gacan uga geysato xaaladda abaareed ee ka taagan dalka.
Dhinaca kale, ilo xog-ogaal ah oo aynu ka heleyno madaxtooyadda Soomaaliya ayaa inoo sheegaya in waxyaabaha kale ee ugu waaweyn oo ay labada dhinac ka wada-hadleen ay ka mid ahaayeen mooshinka ka dhanka ah heshiiska Berbera oo ay shirkadda DP World la gashay maamulka Somaliland.
Tiro xildhibaano oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan mooshin ka keenay heshiiskaas, waxaana la sheegayaa in safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Axmed Alcusaam uu dalbaday in mooshinkaasi laga joojiyo.
Sidoo kale, kulankaan ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeysay uu sii xumaanayay xiriirka u dhaxeeya labada dal, iyadoona maalintii shalay shirkadda DP World oo ay Imaaraadka Carabta leedahay ay madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas heshiis ku saabsan dekedda magaalada Boosaaso kula saxiixatay magaalada Dubai.
Heshiiskaasi ayaa ahaa mid ay shirkadaasi ku maamuli doonto dekedda magaalada Boosaaso muddo dhan 30 sanno, waxaana heshiis kaas oo kale la mid ah ay shirkadaasi hore ula saxiixatay maamulka Somaliland, kaas oo ah mid ay dekedda Berbera ku maamuli doonto muddo 25 sano ah.